[အခန်းဆက်] မူလပုံစံပြန်ရောက်သွားသော ဖက်တီးဘုရင် | yathar Magazine
အခုတလောပိန်နေပြီ ဖက်တီးမဟုတ်တော့တဲ့ ဖက်တီးနင်ဂျာ ဆိုတော့၊ မိတ်ဆွေတို့စိတ်မပူနဲ့တော့ နော်။
ဘယ်ကစပြောရမလဲ နှစ်သစ်ကူးတုန်းကဂျပန်ကိုအလည်တစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့တယ်ဗျ !
မြန်မာနိုင်ငံကပြန်သွားတဲ့အချိန်က ကိုယ်အလေးချိန် ၇၃ကီလို။
ဒါနဲ့ ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကီလို၈၀ !
၇ကီလိုပြန်တိုးလာတဲ့ဖက်တီးနင်ဂျာ ပြန်ဝိတ်ချဖို့လိုပြီထင်တယ်။ ဒါကြောင့် Myanmar Diet Coordinator (MDC) ကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၁လ အတွင်း ၇၃ကီလိုပြန်ရအောင်လုပ်ရမယ်!
ကဲ စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ !
ဒီတစ်ခေါက်ဆိုင်လေးကတော့ Junction Square ဧရိယာအတွင်းမှာရှိပါတယ်။
ကြည့်ပါအုံးဗျ ! ၀င်လိုက်တာနဲ့မှန်ခန်းလေးကနေအတွင်းကိုလှန်းမြင်ရတဲ့မီးဖိုချောင် !
ဟယ် ဒီဆိုင်မှာရနိုင်တဲ့ဟင်းလျားတွေရဲ့၉၀%က ဆိုင်ရဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တွေဖြစ်တယ်ဗျ ! ခေါက်ဆွဲကလည်းလက်လုပ်ဗျာ။
ဒါတွေကြောင့် အရသာရှိမှာမလွဲဘူး !
မီနူးကိုစဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ စတွေ့ရမှာကအရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ ပေါက်စီ !
အားလုံး (၈)မျိုး အရောင်ပဲမတူတာမဟုတ်ဘူးဗျ အထဲကအစာတွေလည်းမတူပါဘူးတဲ့ဗျာ ! အဲ့ဒါနဲ့
မှာစားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ၀န်ထမ်းလေးက သံသယမျက်လုံးလေးနဲ့ …
ဒီဆိုင်မှာနာမည်ကြီးတာ ၈မျိုးပေါက်စီ လေမဟုတ်ဘူးလား? စားကြည့်ချင်တယ်ဗျ ! လို့ပြောပေမယ့်
အဖြေက နိုး !
ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးကြည့်တဲ့အခါ ဒီပေါက်စီလေးထဲမှာဝက်သားပါဝင်တဲ့အတွက် Diet လုပ်နေသူတွေနဲ့ မသင့်တော်ဘူးလို့ကြားသိခဲ့ရတယ် …
ဒါပေါ့ မြင်တာနဲ့စိတ်အာရုံကိုဖမ်းစားလိုက်တာ အားလုံးကိုမေ့သွားတယ်။ စားလိုက်မိရင် ဖက်တီးပြန်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၀န်ထမ်းလေးတွေရေ !
ပြောရရင်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရိုက်ကူးရေဖြစ်တဲ့( [အခန်းဆက်] ၀ိတ်ချနေလည်း သောက်ကြတာပဲမလား !)
၀ိတ်ချတဲ့ဆောင်းပါးလို့ပြောပြီး ဘီယာတွေကိုသောက်နေတော့တာပဲလို့ အံ့အားသင့်လောက်အောင် လုပ်ခဲ့မိတော့ ဒီတိုင်းလွှတ်ထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး ထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။
မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ! အရသာရှိတဲ့ပေါက်စီလေးတွေ မစားခဲ့ရဘူးဗျာ!
ဒါကြောင့် ၈မျိုးပေါက်စီ လေးတွေကိုစားချင်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်လာရောက်မြည်းစမ်းကြည့်ပါလို့ !
※၈မျိုးပေါက်စီလေးတွေကဘယ်လိုလေးတွေလည်းဆိုတာသိချင်သူများအတွက် ဒီမှာ ။
ဟိတ် ဟိတ် ဟိတ် !
စိတ်မပူပါနဲ့ ဒီဟာကအမြင်အားဖြင့်တော့ အသားပေါက်စီပေမယ့် တကယ်တမ်းအထဲကအစာက ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ! ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပြည့်ဗျာ။
ဒါကြောင့် ပေါက်စီပေမယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ !
တကယ်က အသားပေါက်စီတွေရဲ့ကယ်လိုရီက အပြင်အခွံမှာလည်းအများကြီးမြင့်နေတာဆိုတော့အသားမပါတော့စိတ်အေးရတာပေါ့လို့မထင်ပါနဲ့! ပေါင်းထားတဲ့အစားအစာမှာပါဝင်နေတဲ့ ကယ်လိုရီကိုလည်းသတိမထားလို့မရဘူးဗျာ။
ဘယ်လိုလဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတွက်အိုင်ဒီယာမရှိတော့ဘူးလားလို့ ဒင်ဆမ်းအကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားနေမိတယ်ဗျ !
၀က်ရိုးပြုတ်အရသာအပြည့်စိမ့်ဝင်နေတဲ့ စွပ်ပြုတ် !
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပြည့်ပါဝင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖက်ထုပ်ဆိုတော့ Diet အတွက်အဆင်ပြေ ! ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ !
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဖက်ထုပ်အခွံနဲ့ခေါက်ဆွဲကပြုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့် Diet လုပ်နေချိန်မှာ သတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ တနေ့တာစားလိုက်တဲ့ကယ်လိုရီကိုအမြဲသတိထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဗျ။
နောက်တစ်ခု Diet မီနူးလေးကတော့ ဒီမှာပါ !
ဒီဟာလေးလည်း မုန်လာဥထဲရေဓာတ်တွေအပြည့်ဝင်နေတော့ အဆင်ပြေ !
မဟုတ်သေးဘူး ဒါလေးကလည်းကြော်ထားတာဆိုတော့ ! (ရယ်လျက်)
သိနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ မုန်လာဥမှာ ကယ်လိုရီမရှိပေမယ့် ကြော်ထားတာဆိုတော့ ကယ်လိုရီမြင့်နေပြန်ရော။ ၀န်ထမ်းလေးတွေက ၈မျိုးပေါက်စီလေးမစားရတဲ့ ဖက်တီးနင်ဂျာ ကိုစိတ် ပြောင်းအောင် အကြော်လေးနဲ့နှစ်သိမ့်နေတာလား !
ဒါပေမယ့် ဟင်းပွဲလေးတွေရဲ့အရသာ so good! တစ်ခုပြီးတစ်ခုမရပ်တမ်းစားချင်လာအောင်တကယ် ကောင်းဗျာ။ တကယ်ကိုစားသင့်တဲ့ဟင်းပွဲလေးတစ်ပွဲပဲ။
နောက်ထပ် ကြက်ဟင်းခါးသီးနှင့်ဝက်နံရိုးနှစ်ပြန်ပေါင်းစွပ်ပြုတ်၊ ပြီးတော့ ပျားသံပုရာရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လီ။
ဒီတစ်ခေါက်ရိုက်ကွင်းမှာအမျိုးမျိုးစဉ်းစားစရာတွေရခဲ့တယ် . . . . .
အကြော်ဟင်းတွေများတာရယ် ဆီများများနဲ့ချက်တဲ့အလေ့အထရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်ရုံ အကြော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေမျှဝေနိုင်ပါ့မလား။ စာဖတ်ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်း မှားယွင်းနားလည်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးအသိပေးဗဟုသုတတွေဖြစ်နေပြီလားလို့ စိတ်ပူသွားခဲ့မိတယ်။
ဒါကြောင့် Myanmar Diet Coordinator (MDC)ရဲ့ ဖက်တီးနင်ဂျာက Diet အတွက်အမျိုးမျိုးသော အသိပညာ တွေကိုမျှဝေပေးချင်စိတ်တွေ ပိုမိုထက်သန်လာခဲ့မိတယ်ဗျ။
ကဲ နောက်ထပ်တွေ့ကြအုံးမယ်ဗျာ !
[အခန်းဆက်] Tokyo Muscle Coffee